Yechipiri beta vhezheni yeApple 12 yakatoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mashoma apfuura Google yakaburitsa yekutanga beta vhezheni yeiyo ichave inotevera vhezheni yeApple 12 zvino miedzo yechipiri beta vhezheni mune dzimwe shanduko dzakakosha dzakawedzerwa dzine chekuita nekuvandudzwa kwepachivande, zviziviso uye nezvimwe.
Ye shanduko dzinonyanya kukosha izvo zvakaunzwa mune yekutanga beta ndiyo nyowani dhizaini inoshandisa iyo «Zvinhu Iwe» pfungwa, Ichaiswa otomatiki kune ese mapuratifomu uye interface zvinhu, uye hazvizodi chero shanduko kubva kune vanogadzira application.
Zvakare ne yakakosha mashandiro ekugadzirisa nemutoro uri paCUU yeiyo huru sisitimu masevhisi yakadzikira ne22%, izvo zvakazo tungamira mukuwedzera kwehupenyu hwebhatiri ne15%. Nekuderedza kukakavara kwekukiya, kudzikisira latency, uye kugadzirisa I / O, iwe unovandudza mashandiro eshanduko kubva kuchimwe chikumbiro kuenda kune chimwe uye kupfupisa nguva yekutanga application.
Uye zvakare kuvandudzwa kwekuita kwemibvunzo yedhatabhesi nekushandisa inline optimizations mune iyo CursorWindow mashandiro. Nezve diki dhata, CursorWindow iri 36% nekukurumidza, uye kune maseti ane anopfuura 1000 mitsara, iyo yekumhanyisa inogona kusvika kusvika makumi mana neshanu.
Nhasi taburitsa yechipiri Beta vhezheni yeApple 12 kuti iwe uedze. Beta 2 inowedzera nyowani yekuvanzika zvinhu seyakavanzika Panel uye inoenderera nebasa redu rekuchenesa vhezheni yacho.
Kupera-kumagumo, kune zvakawanda kune vanogadzira muApple 12, kubva kune yakashandiswazve mushandisi mushandisi uye mawijeti eapp, kune vakapfuma haptics, yakavandudzwa mufananidzo nemavhidhiyo mhando, zvakavanzika maficha senge anofungidzirwa nzvimbo, uye zvimwe zvakawanda.
Ye shanduko dzinonyanya kukosha izvo zvinoratidzwa mune ino yechipiri beta vhezheni zvinotaurwa kuti Yakavanzika Panel interface yakaitwa pamwe nekutariswa kweese marongero emvumo, iyo inobvumidza kuti unzwisise kuti ndeipi data iyo mushandisi wekushandisa anokwanisa kuwana. Iyo inongedzo zvakare inosanganisira yenguva inoratidza iyo yekushandisa yekuwana nhoroondo kune maikorofoni, kamera, uye nzvimbo data Pachishandiswa chimwe nechimwe, unogona kuona ruzivo uye zvikonzero zvekuwana zvakavanzika data.
Maikorofoni uye kamera zviitwa zviratidzo zvinowedzerwa kune iyo pani, iyo inowoneka kana iko kunyorera kuri kuwana iyo kamera kana maikorofoni. Kubaya pazviratidzo kunounza dialog ine marongero, zvichikubvumidza iwe kuona kuti ndeipi application iri kushanda nekamera kana maikorofoni uye, kana zvichidikanwa, bvisa mvumo, plus switch dzakange dzawedzerwa kune inokurumidza marongedzero pop-up block iyo maikorofoni uye kamera inogona kumanikidzwa kudzimwa. Mushure mekuimisa, kuyedza kuwana iyo kamera uye maikorofoni kunoguma nekuzivisa uye nekushandura data kushoma kuapp.
Imwe shanduko yakakosha ndeimwe nyowani chiziviso chinoratidzwa pazasi pechiso nguva dzese apo app ichiedza kuverenga izvo clipboard zvemukati nekudana getPrimaryClip () basa. Kana izvo clipboard zvemukati zvakateedzerwa kuchishandiswa chimwe chete icho chaakawedzerwa, hapana ziviso inoratidzwa.
Mukuwedzera iyo interface yekutarisira netiweki yekubatanidza yakagadziridzwa mune yekukurumidza masystem block, iyo pani uye iyo system gadziriso. Iyo itsva Internet dashibhodhi yakawedzerwa iyo inokutendera iwe kuti uchinje nekukurumidza pakati pevakasiyana varidzi uye uone matambudziko. Mune iyo rondedzero yezvinhu zvitsva zvakawedzerwa pamusoro, iwe unogona kuwana zvigadziriso kubva kune yekutanga beta vhezheni uye nyaya pamberi peiyo Android 12 yekuvandudza yekudzidza (yekumisikidza preview).
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi yechipiri beta vhezheni yeApple 12, unogona kutarisa ruzivo mune iyo inotevera chinongedzo.
Kuburitswa kwe Android 12 kunotarisirwa mukota yechitatu ya2021 uye lYakagadzirirwa firmware inovaka inowanikwa iyo Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a / 4a 5G uye Pixel 5 zvishandiso, pamwe chete nezvimwe ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Transsion, Vivo zvishandiso , Xiaomi uye ZTE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yechipiri beta vhezheni yeApple 12 yakatoburitswa kare
zvakanaka kwazvo, uye hazvaizove zvakabatana kuzivisa kufambira mberi pamapurojekiti emahara senge phosh semuenzaniso?
ichi chirevo pa Android chinoita senge ... offtopic